Forex သုတေသနနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း | FXCC
အဆိုပါ Forex Market ကအတွက်အားသုံးသပ်ခြင်း၏အရေးပါမှု
Forex စျေးကွက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှစ်ခုကွဲပြားပုံစံများကိုလာ; နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်အခြေခံခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ ဆွေးနွေးချက်တွေခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်, သို့မဟုတ်ကုန်သည်များကိုပိုမိုသိရှိကုန်သွယ်ဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်နိုင်ရန်အတွက်, နှစ်ဦးစလုံးစည်းကမ်းများကိုပေါင်းစပ် employ သင့်ပါတယ်ရှိမရှိသောအဖြစ်ကုန်သွယ်၏မွေးဖွားချိန် မှစ. ဟုန်းဟုန်းမြည်ကြ၏ပါပြီ။ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်အခြေခံနှစ်ဦးစလုံးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၏ efcacy လည်းစျေးကွက်စျေးနှုန်းများမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ခန့်မှန်းရခက်ဖြစ်ကြောင်းကိုဒီလိုဖော်ပြထားသော "efcient-စျေးကွက်အယူအဆ" အဖြစ်ရည်ညွှန်းဘယ်သို့သောအားဖြင့်အငြင်းပွားနေသည်။
ဆွေးနွေးမှုများဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာဖြစ်ပွားနေသောပါပြီနေတုန်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသောပုံစံသည်အကောင်းဆုံးကဲ့သို့ခပ်သိမ်းသောကုန်သွယ်ကျွမ်းကျင်သူများနှင့်လေ့လာသုံးသပ်သူများအပေါ်သဘောတူကြလိမ့်မည်တဦးတည်းကိစ္စနှစ်ခုလုံးပုံစံများကုန်သည်များကူညီနိုငျသော features နဲ့ benefts ရှိသည်ဆိုသောအချက်ဖြစ်ပါသည်။ သုံးသပ်သူများလည်းကမှာဖြစ်စေ profcient ဖြစ်လာမှအလေ့အကျင့်များနှင့်လျှောက်လွှာတစ်တစ်သက်တာယူ, ဒါမှမဟုတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှစ်ဦးစလုံးပုံစံများနိုင်သည်ကိုသဘောတူလိမ့်မယ်။ မီးခုံခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာစွပ်စွဲထိုကဲ့သို့သောဆန်အဖြစ်အခြေခံကုန်စည်ဝယ်လိုအားဆုံးဖြတ်ရန်, ယဉ်ကျေး Homma Munehisa ကတီထွင်တဲ့နည်းလမ်း, ဆယ်ရှစ်နှစ်ရာစုအတွင်းတရုတ်စတင်ခဲ့ပြီးနေတုန်းနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းအနက်မှပထမဆုံးအမှတ်ချက်ချအသုံးပြုမှု, ဒတျချြကုန်သည်များနှင့်ကုန်သည်များကပြန် 1700 ရဲ့၌ရှိ၏။
ညွှန်းကိန်း "ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် fulflling နှင့်နောက်ကျ" ကြောင့်အတော်များများကအခြေခံလေ့လာသုံးသပ်သူများ, နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာညွှန်းကိန်းများအများစုမရနိုင်ခြင်းနှင့်အလုပ်လုပ်မအကြံပြုခြင်း, နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပယ်ချလိမ့်မယ်။ သို့သော်မိမိတို့၏ကုန်သွယ်မှုအစီအစဉ်အတွက်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ employ သူအများအပြားကုန်သည်များရှိပါတယ် MACD, RSI, stochastics, DMI, PSAR (parabolic stop နဲ့ reverse), Bollinger ခညျြအနှောစသည်တို့ကို: သူတို့ကအသုံးအများဆုံးဖြစ်တဲ့အဖြစ်ညွှန်းကိန်း၏ efciency နှင့်တန်ဖိုးသံသယစေခြင်းငှါ , အဘယ်သူသည်အမျိုးအစား, သူတို့ရဲ့အရောင်းအဝင်နှင့်အထွက်ရန်, အညွှန်းကိန်းကိုအသုံးပြုပြီးအမှန်တကယ်အလုပ်လုပ်ဖော်ပြမည်ဖြစ်သည်။ မဟုတ်အခါတိုင်း, ဒါပေမယ့်ဖြစ်နိုင်ခြေများနှင့်ပျမ်းမျှအားစွမ်းဆောင်ရည်၏စည်းကမ်းချက်များ၌၎င်းတို့၏နည်းပညာဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကုန်သည်များကိုမကြာခဏပြုလုပ်ရည်ညွှန်းအဖြစ်သူတို့ "တစ်ခုအစွန်း" ဟုယုံကြည်လောက်ကုန်သွယ်အစီအစဉ်နှင့်မဟာဗျူဟာတီထွင်ခဲ့ကြစေရန်အချိန်ကျော်အလုံအလောက်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်တယ်။
သို့ရာတွင်ထိုသို့အားလုံးနီးပါးအခြေခံလေ့လာဆန်းစစ်-ကုန်သည်များနေဆဲပင်တစ်အတော်လေး vanilla ပေါ်ညွှန်ပြချက်အခမဲ့ဇယားနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၏ပုံစံများကိုသုံးပါလိမ့်မည်ဟုမထင်မှတ်ပါပဲ။ သူတို့ဟာဖြစ်ကောင်းသူတို့ကြိုက်တတ်တဲ့စျေးနှုန်း display ကိုအဘယ်သို့နည်းကိုဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်မယ်: စသည်တို့ကိုခုံ, Heikin-Ashi လိုင်း, pin ကို-အရက်ဆိုင်, ဒါမှမဟုတ်သူတို့အပါအဝင်ရောင်းဝယ်ဖောက်ဖို့မျှမျှတတအခြေခံနည်းဗျူဟာကိုအသုံးပြုဖို့ပါလိမ့်မယ်: ပိုမိုမြင့်မားမကြုံဘူး, အနိမ့်အမြင့်ပျမ်းမျှရွေ့လျား, ဦးခေါင်းနှင့်ပခုံး '' ပုံစံများ, fractals, မဏ္ဍိုင်အချက်များ, Fibonacci retracement နှင့်လမ်းကြောင်းသစ်လိုင်းများဆွဲစတာတွေကဤဖော်မြူလာအချို့တစ်ဇယားအပေါ်ထားရှိနေကြသည်ပြီးတာနဲ့ဇယားဟာပိုလျော့ပါး-ဖော်ပြခဲ့တဲ့ညွှန်းကိန်းအများအပြားင်တစ်ဦးဇယားအတိုင်းအလုပ်များကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ ထိုအမှတ်တိုင်များနေရာနှင့်လည်းနည်းပညာဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းပုံစံများ proft န့်သတ်ချက်အမိန့်ယူဘယ်မှာမှအဖြစ်တွက်ချက်မှုဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လော
ပင်ဆက်ကပ်အပ်နှံအခြေခံခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကုန်သည်များနေဆဲနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကိုသုံးပါရန်ရှိသည်ဒီတော့သူတို့ပဲလုပ်, ဒါမှမဟုတ်သူတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ confrm မှသတင်းများ, ဖြစ်ရပ်များနှင့်အချက်အလက်ထုတ်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်ရန်ပိုနှစ်သက်လိမ့်မယ်။ ထိုသူတို့ဖြစ်ကောင်းတွစ်တာကိုအသုံးပြုပြီး, ဒါမှမဟုတ်စျေးကွက်၏ထိပ်တန်းနှင့်၎င်းတို့၏ကုန်သွယ်ဆုံးဖြတ်ချက်များအပေါ်ဖြစ်ဖို့ကြိုးပမ်းမှုတွင် "တစ် squawk" အဖြစ်ရည်ညွှန်းဘာအသုံးပြုခြင်း၏အပိုကုန်ကျစရိတ်ကိုပေးဆောင်ခြင်းဖြင့်, ခပ်သိမ်းသောလွှတ်ပေး၏ရင်ပေါင်တန်းနေဖို့ပါလိမ့်မယ်။
သို့သျောလညျးကြှနျုပျတို့၏ site ၏ဤအပိုင်းကိုအခြေခံနှင့်နည်းပညာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၏ဆွေမျိုးတန်ရာဆွေးနွေးရန်ဤအရပ်၌မရှိကျွန်တော်တို့ဟာအရှည်မှာပြုကြလိမ့်မည်သည့်အတွက် FX ကျောင်းကဖွံ့ဖြိုးဆဲဖြစ်ကြောင်း, ကျနော်တို့အကြားအဓိကသော့ချက် diferences ၏အကျဉ်းခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ပေးသွားကြသည် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှစ်ခုကွဲပြားဒေသများ။
နည်းပညာဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ (မကြာခဏ TA အဖြစ်ရည်ညွှန်း) အတိတ်စျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုစာမေးပွဲအပေါ်အခြေခံပြီးအနာဂတ် fnancial စျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုတွေ၏ကြိုတင်ခန့်မှန်းသည်။ နည်းပညာဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကုန်သည်များအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှစျေးနှုန်းများမှဖြစ်ပျက်ဖွယ်ရှိသည်အဘယ်အရာကိုမျှော်လင့်ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ နည်းပညာဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတစ်ဦးကိုရှေးခယျြအချိန်ကာလအတွင်းစျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုများကိုပြသကြောင်းညွှန်ကိန်းများနှင့်ဇယား၏ကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုးကိုအသုံးပြုပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောစျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုနဲ့ volume အဖြစ်ကုန်သွယ်လှုပ်ရှားမှုကနေစုဝေးစေစာရင်းဇယား, ကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာခြင်းအားဖြင့်, ကုန်သည်များလမျးညှနျခစျေးနှုန်းကိုယူစေခြင်းငှါအရာနှငျ့ ပတျသကျ. ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုလုပ်မျှော်လင့်ပါတယ်။
အတော်များများကနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ-ကုန်သည်များသတင်းအနည်းငယ်သာအာရုံစိုက်။ သူတို့ကနောက်ဆုံးမှာအသေးစိတ်များနှင့်စီးပွားရေးသတင်းဖြန့်ချိ၏ဖြစ်ကောင်းဒရာမာ, နောက်ဆုံးမှာတစ်ဦးဇယားအပေါ်ကိုယ်တိုင်ကထုတ်ဖေါ်မည်ဟူသောအမြင်ယူပါ။ ကုန်သည်တွေတောင်မှဒေတာဖြန့်ချိမြင်သို့မဟုတ်သတင်းကိုဖတ်, ပြီးတော့တစ်ဦးအသိပေးဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်အခွင့်အလမ်းရှိခဲ့မတိုင်မီအမှန်စင်စစ်တစ်ဦးဇယားအပေါ်စျေးနှုန်းကိုမကြာခဏတုံ့ပြန်နိုင်ပါတယ်။ ဤသည်အများအပြားသေတတ်သောကုန်သည်များတုံ့ပြန်နိုင်ခင်လျှပ်စီးမြန်နှုန်းအတွက်သတင်းကို run ရှေ့နိုင်ဖြစ်ခြင်း algorithmic / မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းကုန်သည်များ၏အကျိုးဆက်အဖြစ်ရှိနိုင်ပါသည်။
အခြေခံလေ့လာသုံးသပ် Forex ၌ဤလူမျိုးသည်ရဲ့ငွေကြေးစနစ်၏အဘိုးပြတ် afecting စီးပွားရေးအခြေအနေများ၏အနီးကပ်စာမေးပွဲလိုအပ်ပြီးတစ်ဦးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၏အခ်ါတန်ဖိုးကိုဆန်းစစ်။ "စီးပွားရေးညွှန်းကိန်း" ဟုချေါဘာတွင်ပါရှိသောကြသည်အများအပြားအရာတစ်ငွေကြေးရဲ့လှုပ်ရှားမှုအတွက်အခန်းကဏ္ဍများစွာအဓိကအခြေခံအချက်တွေရှိပါတယ်။
စီးပွားရေးညွှန်းကိန်းများထိုကဲ့သို့သောတိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးစွမ်းဆောင်မှုအသေးစိတ်ကြောင်း Markit အဖြစ်အစီရင်ခံစာများနှင့်ဒေတာများတစ်နိုင်ငံ၏အစိုးရကဖြန့်ချိခြင်းသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းဖြစ်ကြသည်။ စီးပွားရေးဇုန်အစီရင်ခံစာများနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကျန်းမာရေးယေဘုယျအားဖြင့်တိုင်းတာသောအားဖြင့်နည်းလမ်းရှိပါတယ်။ စီစဉ်ထားအချိန်များတွင်ဖြန့်ချိသည့်ဒေတာများတစ်နိုင်ငံ၏စီးပွားရေးအခြေအနေတစ်ခုအရိပ်အယောင်တွေနဲ့စျေးကွက်ထောက်ပံ့; ဒါကြောင့်တိုးတက်သို့မဟုတ်ငြင်းဆန်ခဲ့သလဲ FX ကုန်သွယ်ခြင်း, ပျမ်းမျှအနေဖြင့်မည်သည့်သှဖေ, ယခင်ဒေတာအတွက်, ဒါမှမဟုတ်ကြီးမားတဲ့စျေးနှုန်းနဲ့ volume လှုပ်ရှားမှုတွေဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်, ခန့်မှန်းခဲ့သည်ကိုအဘယျသို့ကနေ။
ဒီနေရာတွင် (လွှတ်ပေးရေးအပေါ်) ငွေကြေးစျေးနှုန်း efect နိုင်သည့်လေးကိုအဓိကအစီရင်ခံစာများများမှာ
ဂျီဒီပီတစ်နိုင်ငံ၏စီးပွားရေးကို၏အကျယ်ဆုံးအတိုင်းအတာရှိ၏ တစ်ဦး defned ကာလအတွင်းတိုင်းပြည်အတွင်းထုတ်လုပ်အားလုံးကုန်ပစ္စည်းများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကို၏စုစုပေါင်းစျေးကွက်တန်ဖိုး။ ဂျီဒီပီ fgures ထို့ကြောင့်ကုန်သည်များမကြာခဏ fnal ဂျီဒီပီ fgures မတိုင်မီထုတ်ပေးနှစ်ခုအစီရင်ခံစာများအပေါ်အာရုံစူးစိုက်, အဲလိုဘဲ; အဆင့်မြင့်အစီရင်ခံစာနှင့်ပဏာမအစီရင်ခံစာ။ ဤအအစီရင်ခံစာများအကြားတည်းဖြတ်မူများကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်စရာမတည်ငြိမ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။
လက်လီအရောင်း '' အစီရင်ခံစာများတိကျတဲ့နိုင်ငံတွင်အားလုံးလက်လီစတိုးဆိုင်များ၏လက်ခံဖြတ်ပိုင်းများကိုတိုင်းတာ။ အဆိုပါအစီရင်ခံစာတွင်ရာသီအလိုက် variable တွေကိုများအတွက်ချိန်ညှိခြုံငုံစားသုံးသူသုံးစွဲမှုပုံစံများတစ်ဦးအသုံးဝင်သောညွှန်ပြချက်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာပိုပြီးအရေးကြီးသောနောက်ကျညွှန်းကိန်းများ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကြိုတင်ခန့်မှန်းရန်နှင့်စီးပွားရေး၏ချက်ချင်းဦးတည်ချက်အကဲဖြတ်ရန်ဖို့အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
၏ထုတ်လုပ်မှုအပြောင်းအလဲများ: စက်ရုံများ, တစ်နိုင်ငံ၏စီးပွားရေးကိုအတွင်းမြှုပ်မိုင်းများနှင့် utilities စီးပွားရေးခြုံငုံကျန်းမာရေးညွှန်ပြနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာအစကသူတို့စွမ်းရည်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်; အသီးအသီးစက်ရုံရဲ့စွမ်းရည်သို့မဟုတ် utility ကိုအသုံးပြုနေပါသည်ပေးသောဖို့ဒီဂရီ။ အကောင်းဆုံးကတော့လူမြိုးတစျမြိုးက၎င်း၏အမြင့်ဆုံးစွမ်းရည်အနီးဖြစ်ခြင်းနေတုန်းတစ်ထုတ်လုပ်မှုတိုးတွေ့ကြုံခံစားရန်လိုအပ်ပါသည်။
ဒီဒေတာကို အသုံးပြု. ကုန်သည်ကြီးများမကြာခဏစွမ်းအင်များအတွက်ဝယ်လိုအား, ရာသီဥတုအပြောင်းအလဲများကြောင့်ထိခိုက်ကြောင့်မတည်ငြိမ်သောဖြစ်နိုင်သည့်, utility ကိုထုတ်လုပ်မှုစောင့်ကြည့်။ အစီရင်ခံစာများအကြားသိသာထင်ရှားသောတည်းဖြတ်မူများကိုအမျိုးသားငွေကြေးမတည်ငြိမ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုငျသောရာသီဥတုအပြောင်းအလဲကြောင့်ဖြစ်ပွားနိုင်ပါသည်။
အဆိုပါ CPI ကအတိုင်းအတာခန့်ဖြတ်ပြီးလူသုံးကုန်၏စျေးနှုန်းများအတွက်ငွေကြေးဖောင်းပွမှုပြောင်းလဲမှု။ နှစ်ရာကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများ။ ဤအစီရင်ခံစာနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအောင်သို့မဟုတ်ယင်း၏ထုတ်ကုန်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများအပေါ်ပိုက်ဆံဆုံးရှုံးလျှင်ကြည့်ရှုရန်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ဒါဟာအစဗဟိုဘဏ်သို့မဟုတ်အစိုးရပေါ်ထွန်းစေသို့မဟုတ်လျှော့ချအခြေစိုက်စခန်းအတိုးနှုန်း, အေးမြဖြစ်စေဖို့ဒါမှမဟုတ်စီးပွားရေးကိုလှုံ့ဆော်ပါလိမ့်မယ်ရှိမရှိသို့မဟုတ်မဆုံးဖြတ်ရန်ဖို့အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။